Nkewa nke rhizome | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Nkewa nke rhizome
Esi lekọta spathiphyllum, iwu maka ịmalite ifuru na ụlọ
Osisi okoko osisi na-acha ọcha na-acha ọcha na epupụta epupụta - Spathiphyllum, a na-akpọ ifuru nke nwanyi obi ụtọ. Ọ bụ ihe obi ụtọ dị ukwuu iji gosi spathiphyllum ifuru na-acha mma nke ọma na-acha ya mma nke ọma. Ọ bụ ezie na osisi a anaghị adị oké njọ, ọ ka na-achọ nlekọta pụrụ iche, na-enweghị nke na ọ gaghị ele ya anya.
Callas: ihe nzuzo nke na-eto eto n'ụlọ
Calla bụ ahịhịa na-eto eto nke ezinụlọ. Calla bụ okooko osisi mara mma mara mma ma nwee ọdịdị dị iche. Ogooko osisi Calla nwere ike iche iche dị iche iche, nke na-eme ka ndị mara ubi mara ya. Ọnọdụ kachasị mma maka callas na-arụ n'ụlọ, ọ bụ ezie na ọnụala anyị sitere na South Africa, bụ nke dị na ebe okpomọkụ nke okpomọkụ, ọ bụ osisi siri ike na osisi na-adịghị mma.
Atụmatụ kachasị mma banyere ejiji na akuku Brunners
Ndị na-akọ ubi na-ekele osisi maka eziokwu ahụ na-acha akwụkwọ osisi ornamental ya dị na mbụ, na obere okooko osisi na-acha anụnụ anụnụ dị n'etiti ndị mbụ iji mee ka anya na-acha ọkụ. Ha na-achụpụ ísì ụtọ, nke ị nwere oge ị ga-atụ anya oge oyi. Tụkwasị na nke a, Brunner enweghị nlekọta na nlekọta, na iche iche nwere ike ịhọrọ dịka atụmatụ nke ngwọta ntanetị.
Kanna: otu esi eche ma gbasaa ifuru
Ịhụ ozugbo ebe a na-ekpo ọkụ na mbara igwe, onye ọ bụla ore fulawa ga-achọ ịkwaga ya n'ogige ya. Ka a sịkwa ihe mere na cannes na-adọta anya ya na akwukwo motley na okooko osisi. N'akpo osisi ndị ọzọ, ha yiri ka ndị dike, n'ihi na n'ọnọdụ dị mma, ha gbatịworo ruo mita abụọ na ọkara. Ee, na nlekọta abụghị picky.
Lakonos: ihe nzuzo nke na-eto eto "American ọbịa"
Lakonos bụ osisi nke ndị ezinụlọ Laconosa (aha Latin bụ Fitolacca). Ụdị nke osisi a nwere ihe karịrị anụ 35 (liana, herbaceous, woody). Na oge anyị, ọ bụ ihe American lakonos. Ọ na-agba ezigbo agba tomato ma na-agbapụ ahịhịa. Akwụkwọ dị gburugburu ma ọ bụ ovate, ruo 20 cm ogologo na 6 cm n'obosara.